မီဒီယာ၊ အွန်လိုင်း၊ သတင်းများနောက်ကွယ်က Fake News များအကြောင်း -၂
Fake New ကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် အမျိုးမျိုး
၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းအချိန်မှာ စတင်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Fake News ဆိုတဲ့ စကားရပ်ဟာ အဘိဓာန်တွေထဲမှာ ဝေါဟာရ အသစ်တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပါဝင်လာတဲ့အတွက် အဘိဓာန်အသီးသီးမှာ Fake News ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲဆိုတာကိုလည်း အနည်းငယ်ဖော်ပြလိုပါတယ်။
Cambeidge အဘိဓာန်မှာ Fake News ဆိုတာကို ''သတင်းတစ်ခုအသွင် အင်တာနက်တွင် ပျံ့နှံ့လာတတ်သော သို့မဟုတ် တခြားသော မီဒီယာများကို အသုံးပြုပြီး ပေါ်ထွက်လာတတ်တဲ့ မှားယွင်းတဲ့ သတင်းများ'' လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ''နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်၊ အမြင်များအ ပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိစေရန် သို့မဟုတ် ပြက်လုံးတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဖန်တီးလေ့ရှိသည်'' လို့လည်း ဆက်လက်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ စာကြောင်းကို အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန် ရရင်တော့ “Fake News တွေရဲ့အား က ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေအပေါ် ရိုက်ခတ်မှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်''။
Collins အဘိဓာန်မှာတော့ ''သတင်းအသွင်ဆောင်ပြီး လူတွေကို အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်အောင်ဆွပေးတဲ့၊ မှန်ကန်မှုမရှိတဲ့ သတင်း အချက်အလက်'' လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Urban အဘိဓာန်ထဲမှာတော့ ''သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သို့မဟုတ် အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွှတ်မှုတစ်ခုခုနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အခါ ယုတ္တိမတန်တဲ့ အနေအထား တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆန်းစစ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ တွေးခေါ်မှု စွမ်းရည်ကို အသုံးမပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ဖန်တီးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်'' Fake News တွေကို အသုံးပြုတတ်တယ်လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ဥပမာ စာကြောင်းအနေနဲ့ ''ဒါတွေက Fake News ရင်းမြစ်တွေပါ။ သမ္မတကို တိုက်ခိုက်တဲ့ သူတွေပေါ့'' လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ထပ်ဖွင့်ဆိုချက် တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားတာက ''ယခင်အချိန်ကမူ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော သတင်းများကို ဖော်ပြထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ရည်ညွှန်းရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်၊ သို့သော် ယခုအခါ အင် တာနက်တွင် လူများ၏ အတွေးအမြင်နှင့် အံမဝင်သော၊ ယုတ္တိမကျသော မည်သည့်အရာကို မဆိုဖော်ပြရန်အတွက် Fake News ဟူသော ဝေါဟာရကို အသုံးပြုသည်'' လို့ ဆို ထားပါတယ်။
Urban အဘိဓာန်မှာပဲ နောက်ထပ်ဖွင့်ဆို ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ''ကလစ်တစ်ချက် နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဝင်ငွေတက်သွားတတ်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဆီ ရောက်သွားအောင် မျှားခေါ်တတ်တဲ့ သတင်းပုံစံမျိုးတွေကို Fake News လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်း ပုံစံတွေဟာ အတုအယောင်တွေဖြစ် တတ်ပြီး အမှန်တကယ် သတင်းတစ်ခုအပေါ် အခြေခံထားတယ်ဆိုရင်လည်း အလွန်အမင်း ပုံကြီးချဲ့ပြီး ချဲ့ကားရေးသားထားတဲ့ သတင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်'' လို့ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်။
တစ်ဖန် နောက်ထပ် ရှင်းလင်းချက်အနေနဲ့ '' Fake News ဆိုတာ စာဖတ်သူတွေ၊ User တွေအနေနဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ကြည့်ဖြစ်သွား အောင် ဆွဲဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ၊ လူပြိန်းကြိုက် သတင်းစာတွေက ဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့ သတင်းအမျိုးအစားတွေကို ခေါ်ပါတယ်။ Fake News တွေဟာ စာဖတ်သူကို ဆွဲဆောင်ဖို့သက်သက် ဖန်တီးထားတဲ့ အတုအယောင်သတင်း ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်'' လို့ ရေးထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုနဲ့ဖြန့်တဲ့ မရိုးသားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ လိမ်ညာမှုတွေ၊ ရုပ်ဖျက်ထားတဲ့ သတင်းအမှားတွေကိုလည်း ခေါ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Fake News အမျိုးအစားများ
Fake News တွေကလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အမျိုးအစားပေါင်းများစွာနဲ့ လာတတ်ပါတယ်။ Fake News အမျိုးအစားတွေထဲမှာ Satire ဆိုတဲ့ သရော်စာပုံစံကို ထည့်ခြင်းမထည့် ခြင်းကလည်း အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တစ်ခုဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သရော်စာကတော့ ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်မရှိတာတော့ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် တွေ့ရတတ်တဲ့ Fake News အမျိုးအစားတွေကို ဖော်ပြရရင် သရော်စာပုံစံ၊ သတင်းခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းကိုယ်ထည်မှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေက မကိုက်ညီတဲ့ သတင်းမျိုး၊ လမ်းမှားစေအောင် ဦးဆောင်ခေါ်သွားတဲ့ သတင်းမျိုး၊ တချို့အချက်အလက်တွေက မှန်နေသည့်တိုင် အကြောင်းအရာအလွဲတွေနဲ့ တင်ပြထားတဲ့ သတင်းတွေ၊ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းတွေ၊ လိုတဲ့ဘက်ကို ဆွဲရေး သားပြီး မိမိရည်မှန်းချက်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့ ဖြန့်ချိတဲ့ သတင်းအမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
www.huffingtonpost.com ဝက်ဘ်ဆိုက်က Fake News အမျိုးအစား တွေအကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့ The Five Types of Fake News ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးရှင် Dr.John Johnson ရဲ့ အဆိုအရ Fake News (၅) မျိုးကို ဖော်ပြရမယ် ဆိုရင်
(၁) ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်းမှားယွင်းတဲ့ သတင်း
(၃) ဝါဒဖြန့်ချိဖို့သက်သက် ရေးသားတဲ့သတင်း
(၄) ဒေတာတွေကို တလွဲအသုံးပြုထားခြင်းနဲ့
(၅) မတိကျမသေချာတဲ့၊ ယုတ္တိကင်း မဲ့တဲ့ သတင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း မှားယွင်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးပါလျက် ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းမျိုး၊ Social Media တွေမှာ မကြာခဏ တွေ့ရတတ်တဲ့ အုတ်အော်သောင်း နင်းဖြစ်စေမယ့် တစ်နည်းအားဖြင့် Like တွေ များများရအောင် ဖန်တီးတတ်တဲ့၊ ပရိသတ်များများ သတိထားမိလာအောင် ပြုလုပ်တတ်တဲ့ သတင်းမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘက်လိုက်ရေးသားတဲ့ သတင်းမျိုးကတော့ ဝါဒဖြန့်သတင်း ပုံစံလိုပဲ စာဖတ်သူတော်တော်များများ ခြေရာခံမိနိုင်တဲ့ Fake News အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒေတာတွေကို တလွဲအသုံးချတဲ့ သတင်းအချက်အလက်ပုံစံကိုတော့ ဆောင်းပါးရှင်က ''HaveaBeer, It’s Good for Your Brain'' ဆိုတဲ့ စာမျိုးနဲ့ ဥပမာပြပါတယ်။ ဒီလို အဖြေထွက်တဲ့လေ့လာမှုဟာ ကြွက်တွေနဲ့တော့ မှန်ချင်မှန်နိုင်ပေမယ့် လူတွေအတွက်တော့ မှန်ချင်မှ မှန်လိမ့်မယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
Ref: www.collinsdictionary. com, www.dictionary. cambr-idge.org, www.urbandictiona-ry.com, www.factcheck.org, wikipedia, www.huffingtonpost. com.